Zonefs FS - Western Dhijitari Faira Sisitimu yeZoni Dzinotyaira | Linux Vakapindwa muropa
Zonefs FS - Western Dhijitari faira sisitimu yemahara madhiraivha
Iyo software yekuvandudza maneja we Western Dhijitari yakurudzira itsva Zonefs faira system en yekuvandudza tsamba yekutumira linux kernel, with Chinangwa chekurerutsa yakaderera-chikamu basa nemidziyo yekuchengetedza nenzvimbo. Zonefs inosanganisa nzvimbo yega yega padrive nefaira rakasiyana iro rinogona kushandiswa kuchengetedza dhata mune yakasvibirira modhi pasina kumanikidza padanho uye block chikamu.
Nzvimbo haisi POSIX inoenderana FS uye inogumira yechinzvimbo chakatemerwa chinobvumidza maapplication kushandisa iyo faira API pachinzvimbo chekuwana zvakananga kune block block uchishandisa ioctl. Mafaira ane hukama nenzvimbo anoda akateedzana kunyora mashandiro kutanga kubva kumagumo efaira (plugin mode kunyora).
Mafaira akapihwa muZonefs anogona kushandiswa kuisa dhatabhesi pamusoro pezvikamu zvakatemerwa uchishandisa Structured Record Merge (LSM) zvinyorwa zvinyorwa, kutanga nepfungwa yekuchengetedza: nzvimbo yekuchengetera.
Semuenzaniso, zvivakwa zvakafanana zvinoshandiswa muRockDB uye LevelDB dhatabhesi. Maitiro akarongwa anoita kuti zvive nyore kudzikisa mutengo wekutumira kodhi iyo yaive yakagadzirirwa kuitisa mafaera pane kukiya zvishandiso, pamwe nekuronga yakaderera-chikamu basa neakaganhurwa zvikamu kubva kunyorera mumitauro yemitauro isiri C.
Pasi peZones Units yakagadzirirwa HDD kana NVMe SSD zvishandiso, nzvimbo yekuchengetera iyo yakakamurwa kuita matunhu, zvikamu kana mabhureki anoumba iro boka mune iro chete rakateedzana dhata yekuvandudza inobvumidzwa zvakare mukati meboka rese rebhuroko.
Somuenzaniso, kurekodha zoning kunoshandiswa pane zvishandiso zvine Shingled Magnetic Kurekodha (SMR), mune iyo upamhi hwetabhenakeri iri pasi pehupamhi hwemagineti musoro, uye kurekodha kunoitwa pamwe nekukamura kwakasarudzika kwenzira yakavakidzana, ndokuti, cuChero chinyoreso chinoita kuti zvinyorwe pamusoro peboka rese renzira.
Western Dhijiteni Damien Le Moal anotsanangura maZonefs se
Zonefs haisi iyo POSIX-inoenderana faira system. Chinangwa chayo ndechekurerutsa kuitiswa kweiyo zoned block kifaa rutsigiro muzvishandiso nekutsiva mbichana dhizaini faira inosvika neyakafuma faira-yakavakirwa API, ichidzivirira kuvimba yakananga block block faira faira maoctls ayo anogona kuve akasviba kune vagadziri.
Muenzaniso weiyi nzira kuitiswa kweLSM zvivakwa zvemuti mune zoned block zvishandiso zvinobvumira SSTables kuchengetwa mune zone faira yakafanana neyakajairwa faira sisitimu pane huwandu hwenzvimbo dzechikamu chakakamurwa.
Kana iri yekutyaira kweSSDD, pakutanga tiva neiyi link yekuteedzana yekunyora mashandiro nekutanga kuchenesa data, asi mashandiro aya akavanzwa padanho rekutonga uye iyo FTL dura (Flash dura dura). Kuti iwedzere kushanda zvakanaka pasi pemamwe marudzi emutoro, NVMe yakagadzirisa iyo ZNS (Zoned Namespaces) interface, iyo inobvumidza kupinda kwakananga kumatunhu pasina kupfuura nepakati peiyo FTL.
Linux yezvikamu zvakaoma zvinotyairwa kutanga nekernel 4.10 inopa ZBC (SCSI) uye ZAC (ATA) block block uye kubva vhezheni 4.13, dm-zoned module yawedzerwa, iyo inomiririra zoni disk seyakajairika block kifaa, ichivanza zvinyorwa zvekunyora zvinoshandiswa panguva yebasa.
Padanho refaira system, zoning rutsigiro yatove yakabatanidzwa muF2FS faira system uye seti yezvimedu zviri kugadzirirwa iyo Btrfs faira sisitimu, iyo yakarerukirwa kuchinjika kune inotyairwa madhiraivha nekushanda muCoW kopi-on-kunyora maitiro. Ext4 uye XFS inomhanya pamadhirowa ane zoni anogona kurongeka uchishandisa dm-zoned.
Kuti zvive nyore kushandurwa kwemafaira masystem, iyo ZBD interface inokurudzirwa, iyo inoshandura zvisina kurongeka kunyora mashandiro mumafaira mukuteedzana kwekuteedzana kwekunyora mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zonefs FS - Western Dhijitari faira sisitimu yemahara madhiraivha
Chrome 79 inopaza paLinux? Hausi wega
Iwe unoda VPN kana iwe ukashandisa Linux?